महोत्तरी प्रहरीको दावी हावादारी सावित, एसपी आचार्य एक कमजोर प्रहरी अधिकारी ! – खोज केन्द्र
» खोज रिपोर्ट » प्रदेश » समाचार » समाज अंक: 7899
महोत्तरी प्रहरीको दावी हावादारी सावित, एसपी आचार्य एक कमजोर प्रहरी अधिकारी !
प्रहरीको उदासीनता भयो भने सर्वसाधारणले कसरी दु:ख पाउछन भन्ने उदाहरण जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी र त्यहाँका प्रमुखले गरेको एउटा कमजोरीलाई हेरे पुग्छ । गत जेठ २० गतेदेखि महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका ७ भ्रमरपुराकी २६ वर्षीया सुजिता ठाकुर हराइरहेकी थिइन् ।
ती दुवै आयोगले महोत्तरी प्रहरीलाई खोजविनको लागि पत्राचार गरेको भएपनि महोत्तरी प्रहरीले वेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेका बेला गत हप्ताको आइतबार उनै सुजिताको शव प्रहरीले घर नजिकैको सेफ्टी ट्याङ्कीबाट फेला पार्यो । प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयका डीएसपी ज्ञानकुमार महतो समेतको टोलीले अनुसन्धान थालेपछि सो शव उत्खनन गर्न प्रहरी सफल भएको हो ।
यस सम्बन्धमा महोत्तरी प्रहरी कार्यालयका डीएसपी एवं प्रवक्ता प्रकाश विष्टले प्रहरीलाई प्रहिले त्यस्तै सूचना आएकोले त्यतातर्फ नै ध्यान केन्द्रित गरिएको स्वीकार गरे । ससुरा अझै नभेटिएको बताउँदै उनले प्रहरीले वेवास्ता गरेको भए यस्तो रिजल्ट कसरी आउँछ र रु भन्ने प्रतिप्रश्न गरे । अब कसले के भन्छन् भन्ने बारे प्रहरीको चासो नरहने उनको दावी थियो ।
‘एक–डेढ वर्ष पहिले पनि देवर रुपेशले बहिनीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको थियो । तकिया मुखमा कोचेर मार्न खोजेको थियो । उनी त्यतिबेला उसको हातमा दाँतले टोकेर बाँचेकी थिइन् । तर, सधैँ एकनाश हुँदैन आखिर पापीहरूले मेरो बहिनीको ज्यान लिएरै छाडे,’ सुजिताका दाजु शिवम पाण्डले भने ।
सुजितालाई उनकै घर परिवारबाट हत्या गरेको प्रहरीमा उजुरी गरेको भएपनि लामो समय खोजतलासमा आलटाल गरेका थिए । अन्तिममा अनुसन्धानको सुई घरपरिवारतर्फ सोझिएको थियो । प्रहरीले सुजिताको हत्या आरोपमा देवर रुपेश र श्रीमान् मुकेश ठाकुरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । माइती पक्षले सुजिताको हत्या दाइजोको कारण भएको आरोप लगाएका थिए । तर सुजिताका ससुराले उनको परपुरुषसँग हिमचिम भएकाले अरु नै कसैले हत्या गरेको हुनसक्ने भन्दै आएका थिए ।